Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Job 19
Nepali New Revised Version, Job 19
1 तब अय्‍यूबले जवाफ दिए:
2 “कहिलेसम्‍म तपाईंहरू मलाई दु:ख दिनुहुन्‍छ, र वचनहरूले मलाई आघात गर्नुहुन्‍छ?
3 दश पल्‍ट तपाईंहरूले मलाई अपमान गर्नुभयो, र निर्लज्‍ज भएर मलाई आक्रमण गर्नुभयो।
4 वास्‍तवमा यदि मैले भूल गरेको भए तापनि भूल ता मेरै नै हो।
5 तर यदि साँच्‍चै तपाईंहरू मभन्‍दा माथि आफूलाई उचाल्‍नुहुन्‍छ र मेरो नम्रतालाई मेरो विरुद्धमा प्रयोग गर्नुहुन्‍छ भने,
6 म यो तपाईंहरूलाई भन्‍दछु, कि परमेश्‍वरले नै मलाई अपराधी तुल्‍याउनुभएको हो, र उहाँले मेरो चारैतिर जाल फिँजाउनुभएको हो।
7 “ ‘अन्‍याय भयो’ भनी यदि म कराएँ भने, कसैले जवाफ दिँदैन, सहायताको निम्‍ति बिन्‍ती गरें भने पनि, म न्‍याय पाउँदिनँ।
8 उहाँले मेरो बाटोमा पर्खाल लाउनुभयो, र म निस्‍कन सक्‍दिनँ, मेरो बाटोलाई उहाँले अन्‍धकारद्वारा छोप्‍नुभएको छ।
9 उहाँले मेरो जम्‍मै मान खोस्‍नुभएको छ, उहाँले मेरो शिरबाट मुकुट उतारिदिनुभयो।
10 उहाँले चारैतिरबाट म खतम नहोउञ्‍जेल मलाई हिर्काउनुहुन्‍छ, रूख उखेलिएझैँ उहाँले मेरो आशा टुटाइदिनुहुन्‍छ।
11 उहाँको रीस ममाथि साह्रै परेको छ, उहाँले मलाई आफ्‍नो शत्रु ठान्‍नुहुन्‍छ।
12 मलाई आक्रमण गर्नलाई उहाँले फौज पठाउनुहुन्‍छ, र तिनीहरू मेरो पालको चारैतिर छाउनी हाल्‍छन्‌।
13 “उहाँले मेरा दाजुभाइहरूलाई मबाट पराई बनाउनुभएको छ, मेरा मित्रहरू मबाट बिलकुलै अलग रहन्‍छन्‌।
14 मेरा कुटुम्‍बहरू र चिनाजानाहरू पछि हट्‌छन्‌, मेरा साथीहरूले मलाई बिर्सेका छन्‌।
15 मेरा पाहुना र दासीहरूले मलाई बिरानाझैँ व्‍यवहार गर्छन्‌, तिनीहरूका दृष्‍टिमा म ता एक विदेशी भएको छु।
16 मेरा दासलाई म बोलाउँछु, तर त्‍यसले उत्तर दिँदैन। यद्यपि म आफ्‍नै मुखले बिन्‍ती गर्दछु।
17 मेरो सास मेरी पत्‍नीलाई दुर्गन्‍धमय लाग्‍छ, मेरा आफ्‍नै दाजुभाइहरूका अगाड़ि म गह्नाउने भएको छु।
18 स-साना केटाहरूले समेत मलाई घृणा गर्छन्‌, र म देखा पर्दा तिनीहरू गिल्‍ला गर्छन्‌।
19 मेरा सबै घनिष्‍ठ साथीहरू मलाई घृणा गर्छन्‌, अनि मैले प्रेम गरेकाहरू मेरो विरुद्धमा उठेका छन्‌।
20 म त हाड़ र छाला भएको छु, म त मरिसकेरै बाँचेको छु।
21 “दया गर्नुहोस्‌, हे मेरा मित्र हो! दया गर्नुहोस्‌, किनभने परमेश्‍वरको हात ममाथि परेको छ।
22 परमेश्‍वरले मेरो खेदो गर्नुभएझैँ तपाईंहरू किन खेदो गर्नुहुन्‍छ? के तपाईंहरूले मलाई सताउनुभएको पुगेन र?
23 “मेरा वचनहरू शिलामा लेखिएका भए ती चर्मपत्रमा लेखिएका भए,
24 फलामको हतियारले खोपेर सीसाले भरिदिए, अथवा चट्टानमा सधैँको निम्‍ति साक्षी हुनलाई खोपिएको भए हुनेथियो!
25 तर म जान्‍दछु, मेरा उद्धारक जीवित हुनुहुन्‍छ, सबैभन्‍दा अन्‍तिम समयमा उहाँ पृथ्‍वीमा खड़ा हुनुहुनेछ।
26 अनि मेरा छाला नाश गरिसकेपछि, मेरो शरीरमै म परमेश्‍वरलाई देख्‍नेछु।
27 म आफ्‍नै आँखाले उहाँलाई देख्‍नेछु, आफैले नै देख्‍नेछु अरू कसैले होइन। मेरो हृदय मभित्रै कति लालयत बन्‍छ!
28 “यदि तपाईंहरूले मलाई यसो भन्‍नुभयो भने, हामीले उसलाई कसरी लखेट्‌ने? किनकि दु:खका जड़ तिनी आफै हुन्‌,
29 तपाईंहरू तरवारदेखि होशियार रहनुहोस्‌, किनकि क्रोधले तरवारद्वारा दण्‍ड ल्‍याउनेछ, र त्‍यहाँ न्‍याय छ भनी तपाईंहरूले जान्‍नुहुनेछ।”
Job 18 Choose Book & Chapter Job 20